Maxkamadda degmada Berbera oo maanta xukunno xarig ah ku ridday 7 nin oo burcad-badeed Soomaali ah. – Radio Daljir
Maxkamadda degmada Berbera oo maanta xukunno xarig ah ku ridday 7 nin oo burcad-badeed Soomaali ah.
Berbera, Oct 05 ? Maxkamadda magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland ayaa maanta xukunno xarig ah ku ridday todobo nin oo burcad-badeedSoomaali ah, kuwaasi oo lagu helay dambiyo la xiriira arrinkaasi sida guddoomiyaha maxkamaddaasi uu sheegay.
Maxkamadda ayaa markii ay dhageysatay eedaymaha raggaan lagu soo oogay oo ahaa kuwo ku salaysnaa burcad-badeednimo waxaa ay ku xukuntay min shan-sano oo xarig.
Guddoomiyaha maxkamaddaasi darajada 1-aad ee degmada Berbera Cismaan Ibraahin Diiriye oo u warramay war-baahinta ayaa sheegay raggaani in ay qiraal ahaayeen, kuwaasi oo qaar ka mid ahi ay maxkamadda horteeda ka caddeeyeen ahaanshaha burcad-badeed.
Ragga maanta ay xukuntay maxkamadda Berbera ayaa gacanta Soomaaliland ku soo galay si lama filaan ah kaddib markii markab kuwa dagaalka ah oo laga lahaa dalka Ruushka uu ku soo daadiyey xeebta Berbera taasina ay keentay in ay qabtaan ciidamo-badeedka Soomaaliland.
Ma jirto faah-faahin dheeraad ah oo muujinaysa habka raggaan lagu soo qabtay iyo falalka ay gacmaha kula jireen toona xilligii la soo qabtay.
Ma?ahan markii ugu horraysay oo maxkamad ku taalla Soomaaliland ay sidaan oo kale xukunno ku riddo rag lagu eedaynayo galitaanka falal burcad-badeednimo.